ပြည်သူလူထု၏ ဘုံရန်သူဖြစ်သော စစ်အာဏာရှင်တို့ နှင့် အကျိုးတူ စီးပွားဖက်ဖြစ်သည့် တရ…
ပြည်သူလူထု၏ ဘုံရန်သူဖြစ်သော စစ်အာဏာရှင်တို့ နှင့် အကျိုးတူ စီးပွားဖက်ဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖောက်ပြန်သော မူဝါဒကြောင့် ဗမာ့လူထု ပူမှုပွေခဲ့ရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မသေရုံတမယ် မျော့မျော့သာ ကျန်တော့သည့် တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာရှင်တစ်စုက ပန်းပန် သနပ်ခါးလိမ်းပေးကာ မြူစွယ်သည့်အဖြစ်အား အရှေ့ အနောက် တောင်မြောက် ကမ္ဘာ့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ကောင်းချီးပေးကြပြီး အားကြိုးမာန်တက် ၎င်းတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဂုတ်သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်ရန် ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ဖြစ်နေကြသည်။
ယခုလို ပြည်တွင်း ပြည်ပ အချောင်သမားများ ပူးပေါင်းကာ တိုင်းပြည်ကို အသေတတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အ၀ိဇိပို့ မည့် လုပ်ရပ်များအား ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းမှ ညီညာဖျဖျ ဆန့် ကျင်တိုက်ဖျက်ရန် လိုပါသည်။ ထိုသို့ ဆန့် ကျင် တော်လှန်ကြရာတွင်လည်း ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်နှင့် လူထု ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စစ်အာဏာရှင်သည် အဓိက လက်သည် သမိုင်းတရားခံ ပစ္စုပ္ပန်တရားခံ ဖြစ်သည်ကို မမေ့ကြဖို့ လိုပါသည်။
မိမိတို့ ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ပျောက်ပျက်မသွားဖို့ လိုပါသည်။ မိမိတို့ လျှောက်လှမ်းသည့်လမ်းေ၀၀ါးမသွားဖို့ လိုပါသည်။
သို့ ဖြစ်၍ မိမိတို့ ၏ ဘုံရန်သူ စစ်အစိုးရကို သက်ဆိုးရှည်အောင် ကျောထောက် နောက်ခံပြုပေးသည့် တိုင်းပြည်များနှင့် ၎င်းတို့ ၏ ဖောက်ပြန်သော မူဝါဒများကို ဆန့် ကျင်ရှုတ်ချ တိုက်ပွဲဝင်ကြရမည် ဖြစ်သလို ဘုံရန်သူစစ်အာဏာရှင် အစိုးရကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးကိုလည်း မမေ့မလျော့ မပေါ့ဆကြရန် တိုင်းပြည်အကျိုး ပြည်သူ့ အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် သတိပေးလိုက်ရပါသည်။
ပြည်သူ့ နံပါတ်(၁) ရန်သူ စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ မုချကျဆုံးရမည်။
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 15:00:23
တော်ဝင် သစ်အချောထည် လုပ်သားများကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် | DVB
Lead Storyသတင်းအလုပ်သမားတော်ဝင် သစ်အချောထည် လုပ်သားများကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်By ဒီဗွီဘီ 29 November 2013 Print EmailTweet Email This Story : Your NameYour EmailReciever EmailYour MessageSend Storyရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၀ါးတရာစက်မှုဇုန်ရှိ တော်ဝင်သစ် အခေ…
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 15:00:06
(25.11.2013) ရက်နေ့ ကချင်ပြည်နယ် ၊ဖားကန့် မော်စီးဇာတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် (ခ.လ.ရ-၂၄၁)တပ်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအားအနိုင်ကျင့် ဓါးပြတိုက်၊ ပြန်ပေးဆွဲနေ နေစဉ်
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:59:49
လက်ပံတောင်း သံဃာများကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု တနှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြ | DVB
Lead Storyနိုင်ငံရေးသတင်းလက်ပံတောင်း သံဃာများကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု တနှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြBy နော်နိုရင်း 29 November 2013 Print EmailTweet Email This Story : Your NameYour EmailReciever EmailYour MessageSend Storyစစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင်ြေ…
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:54:17
လယ်သမားသပိတ်စတင်မည်ဆိုသော မလက်တို လယ်သမားများဆီ အာဏာပိုင်များသွား တွေ့ကြမည် ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မလက်တိုဒေသရှိ လျော်ကြေး မယူသည့်လယ်သမားများကို အကြမ်းဖက်ပါက ဧရာဝတီ တစ်တိုင်းလုံးရှိ တောင်သူ လယ် သမား သပိတ်ဆင်နွှဲမည်ဟု ဆိုထားသော မလက်တိုဒေသသို့ အစိုးရ အာဏာပိုင်များ သွားရောက်တွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်သူ လယ် သမားသမဂ္ဂမှ ဒေါ်စုစုဌေးက ပြောကြား သည်။ ၁၉၉၁-၉၂ခုနှစ်၌ အဆိုပါ မလက်တိုဒေသရှိ လယ်ဧက တစ်ထောင်ကို ဒေသခံများဆီမှ သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး၊ ဧက ၄၅၀ကို လယ်သမားများထံ ပြန် ပေးခဲ့သော်လည်း ဧက ၅၅၀ကို ငါးကန်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း ယင်းငါးကန် များတွင်လည်း ငါးမွေးမြုမှုမပြုသည့်အတွက် ဒေသခံများက ယင်းမြေများကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ ထွန်ယက်စိုက် ပျိုးရန် ကြိုးပမ်းရာမှ ပြဿနာအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လယ်သမားများ အပေါ် အာဏာပိုင် တို့နှင့်ပေါင်းကာ အကြမ်းဖက်မည်ဆို၍ လယ်သမားများကလည်း ဧရာဝတီ တစ်တိုင်းလုံး လယ်သမားသပိတ်ဆင်နွှဲမည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ရက်တွင် လယ်သမားများထံ သွားရောက်တွေ့ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စုစုနွေးက ပြောကြားသည်။ “ဒီဇင်ဘာ ၁၂မှာ တွေ့ကြမယ်၊ လယ်သမားတွေနဲ့ ခုချိန်ထိ တော့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေ ပြဿနာရှာတာတွေ မလုပ်သေးပါဘူး”ဟု သူမကပြောကြားသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မလက်တိုဒေသမှလယ်သမားတစ်ဦးက “သူတို့ပေးတဲ့လျော်ကြေးယူတာ ဆယ်ဂဏန်းပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ မြောက်မြား စွာတဲ့လူတွေက ဘာမှမယူဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။ လယ်မြေသိမ်းဆည်းမှုအတွက် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ပလောင်ကျေးရွာရှိ လယ်သမား ၃၅ဦးကို ငါးကန် ပိုင်ရှင် ဘက်မှ ကရုဏာကြေး ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း ၃၅ဦးသည် အငြင်းပွားနေသည့် ဧက ၅၅၀အကျယ်အ၀န်း တွင် လယ်သိမ်းခံရသူများမဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ပြဿနာဖြစ်ပွားနေသည့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် များ၊ လယ်သမားများ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့တို့ မလက်တိုဒေသ၊ ပ လောင်ကျေးရွာတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်၌ တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှု များကို လက်ခံနိုင် ပါက လက်ခံ၍၊ လက်မခံနိုင်က ဆက် လက်၍ လယ်မြေ ပြန်လုပ်ကိုင်စားသောက်ခွင့်ရရေး လုပ်နေကြဦးမည်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်စုစုနွေးကပြောကြားသည်။ မောင်ထက်
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:53:19
BREAKING NEWS (11/29/2013 – 3:05 PM) ဦးဝင်းချို၊ ကိုလေးနိုင်ဦး (ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းစီ)နှင့် လယ်သမား ၄ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈နှင့် ၅ဝ၅(ခ)တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆လ ပဲခူးမြို့တရားရုံး အမိန့်ချမှတ် သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်ကို KK Press တွင် ပုံနှိပ်သည်ဟု မမှန်မကန်ဖော်ပြ သဖြင့် အမည်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကို တောင်းပန်ရန် KK Press ကြေညာ မြန်မာအစိုးရသစ်၏ ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြအေး ရန်ကုန်မြို့ ဝိတိုရိယဆေးရုံတွင် အသည်းကင်ဆာဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန် အဓမ္မဝါဒီများ၏ ဟောပြောရေးသားချက်များကို စောင့်ကြည့်စိစစ်ရန်၊ ထေရ ဝါဒအလင်းရောင် ထွန်းလင်းပေးရန် သာသနာရေးဝန်ကြီး မဟနသို့ လျှောက်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(အေအေပီပီ)နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်း…
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(အေအေပီပီ)နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့တို့ မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ သားသမီးများပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ပွဲအတွက် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ရက်စွဲ– ၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၃.
အချိန် — နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိ
နေရာ — တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းခန်းမ။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-29 09:30:34
Robert San Aung’s Photos
ယနေ့ ဦးဝင်းချိုနှင့် ရဲဘော် ၆ ဦးအား ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)အတွက် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လချမှတ်စီချမှတ်ပြီး၊ ပုဒ်မ ၁၈ အတွက် ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀၀ စီချမှတ်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးဥပဒေကို နောက်တစ်ကြိမ်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-29 06:56:16
မြင်းခြံခရိုင် ဗ.က.သ များအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များအပါအ၀င် ၉ ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ အမိန့်ချဖို့ အာဏာပိုင်များက တရားရုံးကိုဆင့်ခေါ်ပြီ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၃.၁၂.၂၀၁၂ ) က လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြင်းခြံမြို့မှာ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ ၉ ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ မြို့နယ်စခန်းမှူးက တရားစွဲခဲ့ပြီး အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ တရားစွဲခံထားရသူ ၉ ဦးထဲမှာ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(မြင်းခြံခရိုင်) မှ ကိုဥာဏ်မြင့်သန်း၊ ကိုဇော်လင်းအောင်၊ ကိုမိုးဇက်၊ ကိုငွေဖြိုးအောင် အပါအ၀င် ကျောင်းသား ၅ ဦးနှင့် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ဗမာပြည်) ဥက္ကဌဟောင်း ကိုသန့်ဇင်၊ ကိုအောင်မြင့်ဟန်အပါအ၀င် ၄ ဦး တို့ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က တရားစွဲဆိုခဲ့ပေမယ့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ တရားရုံးကို မသွားရောက်ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီကနေ့ ( ၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ) ရက်နေ့မှာ တော့ ကိုသန့်ဇင်ကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ခေါ်ယူပြီး လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ (၉)ဦးစလုံး မြို့နယ်တရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်ဖို့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-29 05:36:52
Ye Aung’s Photos
AAPP နှင့် FPPS မှ ကျန်းမာရေးအတွက်ပေးသော ကူညီထောက်ပံ့ငွေကို ဒေါက်တာဇော်မင်းလက်ခံရယူနေစဉ်
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-28 15:01:33
မြင်းခြံခရိုင်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၃ နေ့တွင် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားရင်ဆိုင် ရဦးမည့် ၉ ဦးစာရင်း ၁။ ကိုဥာဏ်မြင့်သန်း(ဒီဂရီကောလိပ်)(ဗကသ) ၂။ ကိုဇော်လင်းအောင်(GTC)(ဗကသ) ၃။ ကိုမိုးဇက်(ဒီဂရီကောလိပ်)(ဗကသ) ၄။ ကိုဖြိုးငွေအောင်(ခ)ညီလေး(GTC) ( ဗကသ) ၅။ ကိုသော်ဇင်ဦး(GTC) (ဗကသ) ၆။ ကိုသန့်ဇင်(ဗကသ၊ အထက်ဗမာပြည်၊ ဥက္ကဌဟောင်း) ၇။ ကိုအောင်မြင့်ဟန်(ABSDF အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) ၈။ ကိုပိုင်မျိုးအောင်(ခ)ပိုင်ပိုင် ၉။ ကိုအောင်ကျော်ထွေး
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-27 17:50:10
ရဲဘော်သုံးကျိတ် ထဲက တဦးတည်းသာ သက်ရှိထင်ရှား ကျန်တော့တဲ့သခင်အောင်သိန်း ခေါ် ဗိုလ်ရဲထွဋ် ဟာ ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် အမျိုးသားနေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်မှာ ကွယ်လွန် သွားရှာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-27 17:48:02
N-GUN JA WA 2013-11-27 16:08:00
Post by Arakan Patriotic.
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-26 14:41:20
လက်ပံတောင်း တောင်ကြားစေတီ စိန်ဖူးတော်သစ်တင်ပွဲ တားမြစ်ခံရ
ကိုတိုးကြီး| အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွင်း မိုင်းခွဲမှုကြောင့် စိန်ဖူးတော်မြေခခဲ့ရသည့် လယ်တီသိမ်တော် တောင်ကြားစေတီတွင် စိန်ဖူးတော်အသစ်ပြန်လည်ပူဇော်ရန် ဒေသခံများက စီစဉ်ထားသည်ကို အကောင်အထည်မဖော်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်းက မုံရွာမြို့ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်ရှိ ချမ်းသာကြီးကျောင်းတိုက်တွင် ဒေသခံသံဃာများထံ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်က လာရောက် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
“ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း နယ်မြေအတွင်းမှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီပွဲကိုမပြုလုပ်ဖို့ရန်
အရှင်ဘုရားမှ တာဝန်ယူ ပြောကြားပေးဖို့ တပည့်တ်ာတို့က လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဘုရား&quot;ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်းက လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ လျှောက်ထားခြင်းကို ချမ်းသားကြီးကျောင်းတိုက် ခန်းနေဆရာတော် ဥူးဝဏ္ဏသိန္ဒိက ဒေသခံ သံဃာတော်များနှင့် ရွာသူရွာသားများ၏ သဘောဆန္ဒအလျှောက် စိန်ဖူးတော်အသစ်ပြန်လည်တင်ရန် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ထိုသို့ လယ်တီသိမ်တော် တောင်ကြားစေတီကို လက်ပံတောင်းသပိတ်စခန်းအား ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ ( နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်)တွင် စိန်ဖူးတော်အသစ်တင်ရန် ဒေသခံ သံဃာများနှင့် ရွာသူရွာသားများက နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်တွင် မုံရွာမြို့ ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုပြောကြားသည်။
တောင်ကြားစေတီစိန်ဖူးတော်အသစ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်တွင် မန္တလေးမြို့မှ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသသို့ ပင့်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် သာသနာရေးဝန်ကြီးက လာရောက်တားမြစ်သဖြင့် စိန်ဖူးတော် အသစ်နှင့် ယခင်စိန်ဖူးတော်အဟောင်းနှစ်ခုကို လက်ပံတောင်းဒေသ တုံရွာရှေ့ရှိ ဇရပ်တွင် အပူဇော်ခံထားရှိမည်ဟု ဆရာတော် ဥူးဝဏ္ဏသိန္ဒိက မိန့်သည်။
ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် မိုင်းခွဲခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အနီးရှိ တောင်ကြားစေတီ စိန်ဖူးတော်သည်၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မြေခခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ မြေခခဲ့သည့် စိန်ဖူးတော်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၈ရက်တွင် စိန်ဖူးတော်တင်လှူပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်သံဃာတော် တစ်ပါးဖြစ်သူ ချမ်းသာကြီးကျောင်းတိုက် ခန်းနေဆရာတော် ဥူးဝဏ္ဏသိန္ဒိက လက်ခံရရှိကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-26 14:39:30
စစ်တပ်သိမ်းမြေ မိချောင်းကန် မြေနေရာ ပြန်လည်ရရှိရေးသပိတ်စခန်းဖွင်.
စစ်တပ်မှ သိမ်းဆည်းထားသည့် မိကျောင်းကန် မြေယာများ ပြန်လည် ရရှိစေရေးအတွက် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လမ်းမကြီးဘေး၌ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်။ ဓါတ်ပုံ – ဟောင်ဆာ၊ မဇ္ဈိမ အဆိုပါ သပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ဆန္ဒပြမှုသည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး အဏာပိုင်များမှ နှင့် ညှိနှိုင်းမှု မရရှိသေးကြောင်းသိရသည်။ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအား အနီးကပ် လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အား ၅၀ ချထားသည်ဟု သင်္ဃန်းကျွန်းမှ ရဲမှူးက ဆိုသည်။ Mizzima – News in Burmese
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 13:14:01
DVB – ထောင်တွင်းနဲ့ စစ်ကြောရေးမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ နိုင်ကျဉ်းတွေကိုထောက်ပံ့
DVB TV – 26.11.2013 – ထောင်တွင်းနဲ့ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့မိသားစုတွေကို ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးထွန်းကျေ…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 12:58:08
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ၏သက်မွေးပညာရပ်အစီအစဉ်အားAAPP နှင်.နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ.တို.မှပူးပေါင်းစီစဉ်သည်၊ အောက်ဖေါ်ပြပါသင်တန်းများအားမည်သည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်၊ (၁)ယာဉ်မောင်းသင်တန်း (၂)ကွန်ပြူတာသင်တန်းများအားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများရုံးတွင်စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်၊။ တိုက်(၁)၊အခန်း(၂၀၁)။၃လွာ။၁၅၄လမ်း၊တာမွေမြို.နယ်၊ရန်ကုန်၊ဖုံး၀၉၇၃၁၀၇၉၃၃သို.ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 09:30:44
Political Prisoners case 25112013
ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းတွေကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘူးလို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး ဖိုးစီ အာခိုက်